के तपाईलाई थाहा छ क्यान्सर रोकथाममा मकै प्रयोग गर्न सकिन्छ
क्यान्सर रोकथाममा मकै
सेप्टेम्बर 27, 2018 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
क्यान्सर नहोस भन्न चाहनुहुन्छ भने मकै खाने गरौं । कर्नेल विश्वविद्यालयमा गरियको एक अध्यनले मकैमा एंटीऑक्‍सीडेंटको स्रोत रहेको प्रमाणित गरेको छ । यही स्रोतका कारण क्यान्सरमा उत्पादन हुने फ्रि रेडिकल (free radicals) संग लड्दछ । अन्य खाद्य पदार्थमा भन्दा यस्मा वढी एंटीऑक्सिडेंट (antioxidant) भएकाले राम्रो फाइदा हुने देखिन्छ ।
मकैमा एंटी-कार्सिनोजेनिक (anti-carcinogenic) एजेंट पनि पाइन्छ जस्ले स्तन र लिभर क्यानसरको ट्यूमरसंग लड्ने क्षमता पैदा गराउदछ । विभिन्न प्रकारको क्यान्सरको प्रभावलाई एंटीऑक्‍सीडेंट (antioxidant) को साहेताले कम गर्न सकिन्छ ।
← खगोल विज्ञानमा ग्यालिलियोको योगदान के रहेको छ ?
जिरा र यसको प्रयोग →
अप्रील 16, 2019 अप्रील 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक 9
बाँझोपन हटाउनको लागि कोसेढुंगा सावित बुटी शिवलिंगी
डिसेम्बर 18, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
अगस्ट 3, 2018 नोभेम्बर 18, 2018 साइन्स इन्फोटेक 10
5 thoughts on “क्यान्सर रोकथाममा मकै”
Pingback:यस्ता छन् थाहा पाउनुहोस् क्यान्सर लाग्न नै नदिने फलफुल र तरकारीहरु
Pingback:यस्तो छ क्यान्सर र यसको उपचार
Pingback:क्यान्सरवाट बच्ने यी उपायहरू अपनाउनुहोस
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् क्यान्सर रोगीले खानैपर्ने जुसहरु
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् भुटेको मकै खानुका फाइदाहरु
महिलाको अनुहारमा दाह्री जुँगा किन आउदैन ?